EyeThupha. Ukukhethwa kweendaba zokuhlela | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 01/08/2021 12:00 | Ukuhlaziywa ukuba 19/07/2021 12:23 | IiComics, Iincwadi, Inoveli emnyama
Agasti Yinyanga yekhefu ngokugqwesa kwaye, nangona iyenye yehlobo elingaqhelekanga, into engekhoyo kwaphela kukuqhubeka nokufunda. Le yenye Ukukhethwa kwezinto ezintsha ezi-6 ukuhlela okubandakanya izihloko ezinje nge-de new de UFernando Aramburu o UPilar Navarro kunye nezinye ze udidi zakudala kwaye zangoku, phakathi kwabanye. Sijonga.
1 Ukujikeleza - uFernando Aramburu
2 Njengokuncwina - uFerzan Ozpetek
3 Ukusuka ndawo - Julia Navarro
4 Sukundikhangela- uSara Medina
5 IMaus-limited Ed 40th Isikhumbuzo - Art Spiegelman
6 Izinyo elimnandi: Ukubuya-uJeff Lemire
Ukujikeleza - UFernando Aramburu
Emva kwesenzeko kunye nempumelelo yamazwe aphesheya ebinguye patria, UAramburu uveza le noveli intsha. Umlinganiswa ophambili UToni, utitshala wesikolo esiphakamileyo ndinomsindo nehlabathi, ogqiba ukuzibulala kudlule nje unyaka. Kodwa kude kube ngoku ubusuku ngabunye, kwigumbi lakhe nenja yakhe nakwithala lencwadi apho aphalaza khona, uya kubhala inzima kwaye ingakholelwa ingxelo ebalulekileyo, kodwa hayi ngaphandle kokuthantamisa kunye nokuhlekisa. Kule ngxelo uya kuhlalutya isizathu sesigqibo sakhe, ubumfihlo bakhe kunye nexesha elidlulileyo, usapho kunye nobudlelwane, kunye neendaba ezothusayo zopolitiko eSpain. Zininzi izizathu zokushiya, kodwa mhlawumbi nokuqhubela phambili.
Njengokuncwina -U-Ferzan Ozpetek
UFerzan Ozpetek ngumlawuli wefilimu wase-Italiya ongummi wase-Itali kunye nombhali wesikrini obhalayo. Kule noveli usazisa UGiovanna kunye noSergio, ukuba ngeCawa bameme abahlobo babo ukuba bazokutya kwaye bonwabe kamnandi emva kwesidlo sangokuhlwa. Kodwa enye yezo Cawa iyabonakala umfazi othi wayehlala kuloo ndlu kwixa elidlulileyo kwaye ndifuna ukuyindwendwela kwakhona. Wonke umntu uya kunomdla ibali lakhe, leyo yobomi eya kubasa kwizitrato ezingcolileyo ze Istanbul kunye nemfihlo egcinwa ziindonga zendlu yabo, imfihlo ekwaziyo ukutshintsha ubomi bukaGiovanna noSergio kunye nabahlobo babo.
Ukusuka ndawo -UJulia Navarro
Entsha nguJulia Navarro uthembisa impumelelo entsha, enye yezona zininzi umbhali anazo. Umlinganiswa ophambili ngu UAbhir Nasr, okwishumi elivisayo olingqina Ukubulawa kosapho lwakhe Ngexesha lokuthunywa komkhosi wakwa-Israeli emazantsi eLebhanon. Uyakufunga ukuba uya kubazingela abanetyala bonke ubomi bakhe.
Kwangelo xesha eso sisongelo siyatshutshisa UJacob Baudin, Elinye lamajoni athi bathathe inxaxheba kwisenzo ngelixa uzalisekisa inkonzo yasemkhosini enyanzelekileyo. Unyana wabazali baseFrance, uziva ngathi ungumphambukeli kwaSirayeli kwaye uzama ukuzixolelanisa kunye nobuJuda.
UAbhir wamkelwe zizalamane eParis, apho eziva ebambeke phakathi kwenxalenye yosapho efuthaniselekayo kunye noluntu oluvulekileyo olumnika inkululeko kwaye abantu abancinci abancinci baquka: su kuqala Noura, Ovukela ngokuchasene nothando lukayise lonqulo, kwaye Marion, enye selula apho athe wawa khona eluthandweni.
Kodwa ubomi buka-Abir noJacob buza kudlula kwakhona kwiminyaka kamva eBrussels.
Sukundikhangela -USara Medina
USara Medina unikezela nge Thriller eneenkwenkwezi ngabafazi ababini: USilvia, umphathi ohlala kweyona ndawo intle kakhulu eBarcelona kwaye ofumanisa oko Unyana wakhe uMartí unyamalele. Yonke into anayo ngumyalezo othi, "Ungandikhangeli."
Emva kokuzama ukunika ingxelo malunga nokunyamalala kwakhe emapoliseni, uSílvia uthatha isigqibo sokuphanda yedwa kwaye uyakwazi ukuqhagamshelana UMoni, la owayeyintombi kaMartí, ibhinqa eliselula Ukugcwala kwecocaine ukufezekisa iphupha lakhe: ukufudukela eTonga, iparadesi yesiqithi kwiLwandle lwaseMazantsi. Ukwafumanisa ukuba unesizathu sokufumana uMartí, kuba ubile inyanda yokugqibela awayeyigcine ekhaya.
Abafazi babini, abangathembaniyo, kuya kufuneka bangene kwindawo eyingozi ye-Barcelona, ​​ngogonyamelo kunye nobundlobongela. Ingwe, I-capo yemafia angaphandle, njengekrele leDamocles kubo.
impuku -Umda omiselweyo we-40th Isikhumbuzo- Art Spiegelman
Kwilizwe leenqwelomoya okanye, ngakumbi ngakumbi kwinoveli yemifanekiso, uMaus uthathelwa ingqalelo ngabagxeki njenge yenye yezona zilungileyo zembali. Ukongeza, unetyala lakhe elinye laMabhaso abalulekileyo Ipulitzer. Kwaye uyazalisekisa 40 iminyaka.
Ngoku oku Ushicilelo olupheleleyo Ngefomathi yoqobo ye imiqulu emibini. Ikwabandakanya Incwadana engapapashwa yamaphepha alishumi elinesithandathu ayilwe ngumbhali ngokwakhe.
Khumbula oko impuku libali le Owasinda e-Auschwitz, uVladek Spiegelman, wabalisela unyana wakhe u-Art. Kuyimfuneko ukukhankanya eyona nto iphambili kulo msebenzi: abalinganiswa baneempawu zobuso ze lwanyana, esetyenziselwa ukubalisa. Yiyo loo nto, kunjalo ngamaYuda iimpuku kwaye amanazi are ikati.
Izinyo elimnandi: Ukubuya -UJeff Lemire
Kwaye ukusuka kwiklasikhi siphela ngesinye sezihloko zangoku ezinefuthe kunye nodumo, Izinyo Elimnandi, ngumbhali odumileyo. UJeff lemire kunye nombala UJose Villarrubia. Ibali elibuhlungu le UGus, umntwana oyimbumba ophakathi lomntu nexhama, iyaqhubeka kwiplanethi esele ichithekile yintsholongwane eyingozi. yayo ukuziqhelanisa nomabonakude inokubonwa kwiNetflix.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » EyeThupha. Ukukhethwa kweendaba zokuhlela